Nahoana No Tsipahin’ny Artista ao Singapore Ny Volavolan-Dalàna Hanivanan-tena Natolotry ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy
Nahoana No Tsipahin'ny Artista ao Singapore Ny Volavolan-Dalàna Hanivanan-tena Natolotry ny Governemanta
Voadika ny 07 Oktobra 2014 14:46 GMT
Nandrara ny fandefasana ankavoarian'olona ity lahatsary ity ny governematan'i Singapore satria nosokajiana ho mandrahona ny fiarovam-pirenena.
Lasa mampitodika any amin'izay fomba hifehezana na tonga hatramin'ny fomba hanivanana ny indostrian'ny zavakanto sy ny fialamboly ao amin'ny firenena ny fanapahan-kevitr'i Singapore handrara ny fandefasana ho hitam-bahoaka ny lahatsarim-panadihadiana manasongadina ny antsafa nifanaovana tamin'ny politisiana enina any an-tsesintany.
Nosokajian'ny Media Development Authority (MDA) [Fahefana Fampivelarana ny Media] ho “tsy mahazo alalana omena naoty [hotsaraina]” ity film “To Singapore, With Love” ity fa ahiana hanohintohina ny fiarovam-pirenena. Nihemotra avy eo ny MDA taty oriana, nilaza fa azo jeren'olona vitsy (ankohonana, mpinamana) ihany ny lahatsary fa amin'ny antony ara-pampianarana sy tsy ara-barotra irery.
Efa maro ny Singaporeans no efa nanameloka ny MDA noho ny fandraràna lahatsarim-panadihadiana nahazo sitraka sy loka maro tamin'ny fetiben'ny film ivelan'i Singapore. Nandrisika ny governemanta ry zareo hihevitra indray amin'ny fanapahan-keviny ka hamela ny olona, indrindra fa ny tanora, hihaino ny tantara avy amin'ireo olona an-tsesintany asongadina ao amin'ny film ireo.
Efa dimampolo taona izao no eo amin'ny fitondrana ao Singapore ny antoko People's Action Party (PAP) [Antokon'ny Katroky ny Vahoaka]. Nambarany fa mpitarika komonista, niezaka ny hanongana ny governemanta nandritra ny taompolo 1960, ny sasany amin'ireo olona an-tsesintany nanaovana antsafa tao amin'ny lahatsary.
Maro no tsy nanaiky izany, ary nandresy lahatra fa antony azo ekena izany handraràna ilay sarimihetsika na hanasokajiana azy ho mety hanohintohina ny fiarovam-pirenena. Ireo Artista izay nandray anjara tamin'ny fanangona-tsonia an-tserasera ho fanohannaa ilay lahatsary no namelabelatra ny fanomezana naoty avy amin'ny MDA ho endrika fanivanana izay “tsy manana fampiroboroboana fiaraha-monina mahara-baovao sy velona soa aman-tsara.”
Tan Pin Pin, talen'ny lahatsary, nanantena fa hiteraka resadresaka momba ny lasan'ny firenena ilay lahatsary. “Mila itokisana izahay mba afa-mahita ny valin'ny fanontaniana momba antsika, ho antsika,” hoy ny filazany tao amin'ny fanambarana Facebook.
Niteraka adihevitra momba ny politika napetraky ny MDA amin'ny fanarahamaso ny zavakanto ity zavatra mampifanditra ity. Tahaka ny tsy mandratra ilay hoe “tsy mahazo alalana omena naoty”, saingy natao izy io handrarana ny asan-javakanto iray manimba ny tombontsoam-pirenena na mety “hiteraka fifampiahiahiana eo amin'ny vondrom-poko na antokom-pivavahana na mety hanimbazimba vondrom-pivavahana na vondrom-poko iray, manandratra fomba fiaina na fihetsika mifanohitra amin'ny lalam-piarahamonina, na manao zavatra tafahoatra na/sy manambàka eo amin'ny fomba famoahany hafatra.” Anjaran'ny MDA no manapa-kevitra raha azo jerena ankavorian'olona ny tsangan'asa na fampisehoana iray.
Noho ny fahatsinjovana ny mety hisian'ny fifanandrinana matetika eo amin'ny governemanta sy ny tontolon'ny zavakanto, dia nanolotra volavola antsoina hoe Rafitra Fanomezana Alalana ara-Javakanto Misy Fe-potoana ny MDA tamin'ny volana mey lasa teo, izay hampiroborobo ny “fanasokajian'ny tena ihany sy fiaraha-mandamina” ara-javakanto.
Eo ambanin'io volavolan-drafitra io, ny vondrona ara-javakanto efa voaporofo ny [hadion'ny] lala-nodiaviny ihany dia efa afa-manasokajy ny tsangan'asany. Azo jerena ho tsara kokoa noho ny ampiharina amin'izao fotoana izay mitaky amin'ny vondrona ara-javakanto mametraka fangatahana roa volana mialoha hahazoana alalana hanaovana fampisehoana izany.
Fa ho an'ny Arts Engage, tambajotran'artista Singaporeana, dia mbola misy faneriterena ihany ao anatin'izany rafitra novolavolain'ny MDA izany. Nandresy lahatra ry zareo fa mandiso ihany koa ny fampiasana ny voambolana ‘fanasokajian'ny tena ihany’ satria mbola hanamarina ilay fanasokajiana ihany ireo “mpanombana vontoaty” ao amin'ny MDA. Taty aoriandriana, dia nomarihan'ny lalàna vaovao ihany fa “mbola mila mangataka fahazoan-dalana hanaovana hetsika iray any amin'ny MDA ihany ny fampisehoana tsy misy drafitra fiomanana, na miresaka foko, na fivavahana na politika.”
Arts Engage manazavazava ny “mpanombana vontoaty” ho “mpiasa ambonin'ny misafeliky ny MDA” ihany. Tsy eken-dry zareo ihany koa ny hoe ny artisa no halalaka hanasokajy tena raha mbola tsy maintsy “manaraka ny torolalana sy ny fepetra napetraky ny MDA mialoha” ihany ny tsangan'asan-dry zareo.”
Rehefa hahazoana sazy ny fandisoana ny fanasokajiana, nampitandrina ihany koa ny vondrona fa mety “mbola hampanjaka bebe kokoa ny fanivanan-tena” izany. Ny video eto ambany, izay manome vahana ireo artista manana ny lazany ao Singapore, no mamehy ny tsanga-kevitry ny Arts Engage:
Taorian'ny fanontaniana ny hevi-bahoaka amin'ny ankapobeny, dia nanaiky ny hanaISOTRA ilay hevitra notinapakany MDA tamin'ny Aogositra. Saingy herinandro taty aoriana, dia nandidy ny fandraràna ny lahatsarim-panadihadian'i Tan Pin Pin.
Mbola misy ny rafitra fanivanana satria mbola matanjaka ny Lalàna Momba ny Fihaonana sy ny Fialambolim-Bahoaka (PEMA) . Lalàna no manome alalana ny MDA sy ny Polisin'i Singapore “hampiato na hanafoana ny fahazoan-dalana iray hampiala voly rehefa mifanohitra amin'ny tombontsoam-bahoaka izany, na vetaveta/manohintohina/mamily lalana.”
Ny lalàna no manome fahefana ny MDA hanaiky ny zavakanto ho “vontoaty azo ekena”:
Miantoka fa ny raiftra mampandalo lalàna ny vontoaty dia tarihin'ny fijerin'ny fiaraha-monina amin'ny vontoaty azo ekena, rehefa tsy manohintohina ny soatoavina fototry ny fiarahamonina, manohana ny firindrana ara-pivavahana sy ara-poko, ary miaro ny tombontsoam-pirenena sy ny tombontsoam-bahoaka.
Fotoana angamba izao ny hijerena indray ny lasitry ny lalàna manimba ny fahafahan'ny artista. Nametraka izay teboka izay ny Arts Engage tamin'ny fanoherana ny eritreritra “fanivanan-tena” natolotry ny MDA:
Mipetraka amin'ny toerana diso tanteraka ny fametrahana ny maodein'ny MDA ho mpiambina sy mpanelanelana eo amin'ny artsita sy ireo tsy faly [tsy afa-po] amin'ny vahoaka. Mametraka fifanandrinana diso eo amin'ny ‘artista sy ny fiarahamonina’, manohy hatrany ilay fiheverana amin'ny tokony hiarovana ny fiaraha-monina amin'ny artistany.